TOP: Somaliland oo Hanjabaad usoo dirtay Muqdisho & Dignin adag oo loo diray Turkiga (Maxaa cusub) – Kismaayo24 News Agency Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/8/7/9/kismaayo24.com/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/8/7/9/kismaayo24.com/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/8/7/9/kismaayo24.com/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/8/7/9/kismaayo24.com/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284
TOP: Somaliland oo Hanjabaad usoo dirtay Muqdisho & Dignin adag oo loo diray Turkiga (Maxaa cusub)
Kaydka Wararka Xulka ah Somali News Xulashada K24
by admin 24th November 2015 029
Cali Maxamed Warancadde, wasiirka arimaha gudaha maamulka Somaliland oo saxaafada kula hadlay Cerigaabo, ayaa jawaab adag ka bixihay shir beelaha kasoo jeeda Somaliland loogu qabtay magaalada Muqdisho.
Warancadde ayaa si cad u sheegay ineysan jirin xubno ka soo jeeda Deegaanada Somaliland oo shir kaga qeyb galaya magaalada Muqdisho, kaasi oo looga tashanayo nooca doorasho ee ka dhici karta Soomaaliya sanadka soo socdo.
Eedeyn buuxda ayuu u jeediyay dowlada Turkiga, isaga oo qiray iney waddo Dowlada Turkiga ku xad gudubka qaranimada maamulka Somaliland sida uu hadalka u dhigay.
Wuxuu hadalka ku adkeeyay ineysan ka qeyb gali doonin wadahaladii ka dhacayay magaalada Ankara ee u dhaxeeyay dowlada Soomaaliya iyo maamulka Somaliland.
Sidoo kale Warancadde ayaa digniin u jeediyay dadka kasoo jeeda Somaliland ee kusugan magaalada Muqdisho kuwaasi ka qeyb galay shir ka dhacay magaalada Muqdisho.
KISMAAYO24 NEWS AGENCY
Akhriso:Wasiiradii xil ka qaadista lagu sameeyay
DEG DEG: Sargaal sare oo ka tirsan Alshabaab iyo Ciidamo uu watay oo Goordhaw Kismaayo lagu……
Tifaftiraha K24 24th December 2016
Taliska Booliiska oo codsi u diray shacabka kunool magaalada Muqdisho
SAWIRO: laanta Socdaalka Xukuumada Somaliya oo lawareegtay Dhaqaalaha ka soo xarooda,